Why Keyword Ranking ekwesịghị ịbụ gị Primary Performance Metric | Martech Zone
Oge na-adịghị anya gara aga, atụmatụ SEO dịkarịsịrị mkpa na isiokwu. Keywords bụ isi ihe iji chọpụta arụmọrụ nke mkpọsa. Ndị na-ewu weebụsaịtị ga-eji isiokwu jupụta saịtị ahụ, ndị ahịa ahụ ga-ahụkwa nsonaazụ ya. Nsonaazụ ahụ, gosipụtara foto dị iche.
Ọ bụrụ na nkuzi SEO gị maka ndị mbido gụnyere iji ngwa Google iji chọpụta isiokwu wee tinye ha na weebụsaịtị ahụ niile, ọ nwere ike ịga n'ụzọ ziri ezi, mana ọ bụ naanị ruo n'ókè. N'ebe a dị ugbu a maka SEO, isiokwu dị iche iche bụ otu n'ime ọtụtụ metrik na-eduga n'ọkwa kacha mma nke weebụsaịtị gị.
Na mbido, na-anwa SEO blog m, m mere otu ihe, nri nri nri. Ma nke ahụ abụghị naanị mmejọ m mere nke dugara m SEO mkpọsa ịbụ ihe na-abaghị uru. Ugbua inyochachara ihe niile, enwere m ihe ọmụma zuru oke iji kọọrọ gị nghọta gị ka ị wee lekọta ihe niile dị mkpa tupu ịga n'ihu na SEO gị.
Tupu ịbanye na isiokwu, ka anyị gakwuo n'ihu, otu Google si arụ ọrụ na-arụ ọrụ. N'adịghị ka n'oge gara aga mgbe ọkwa dị elu na SERPS ga-abụ n'ihi na iji isiokwu ma ọ bụ nkebi ahịrịokwu igodo, ugbu a, Google anaghị edepụta isiokwu ndị ahụ. Google ghaputara nsonaazụ ya dịka azịza ya si dị, yabụ, kedụ ozi onye ọrụ ahụ bu n'obi iwepụta. Ihe dị mkpa nke isiokwu dị na nchọta amalitela iju n'ihi na mkpụrụ okwu na-ekwusi ike na okwu ndị ọrụ na-etinye, ọ bụghị ihe ha chọrọ.
Google na agbamume inye gi ajuju ndi ichoro. Nke putara na peeji nwere ike idi n'ọkwa ka elu n'agbanyeghị na okwu ọchụchọ ahụ anọghị na nkọwa Meta ma ọ bụ na ibe. N'okpuru ebe a bụ ihe atụ.
Nwere ike ịhụ etu nsonaazụ kacha elu adịghị enwe ọkara nke okwu dị na ahịrịokwu ahụ. N'otu aka ahụ, na webpage nke nsonaazụ kacha elu, okwu ahụ bụ “mmiri ozuzo ” adịghịdị adị. Nke a na-egosi otú mkpa nke nsonaazụ ndị metụtara Google karịa naanị Keywords.
Nke a na-ewetara anyị ruo n'ókè nke na isiokwu dị ike dị na isi apụtaghị ihe ọ bụla na atụmatụ SEO nke oge a. Isiokwu rankings bụ naanị otu akụkụ nke usoro iji tọghata. Nke a bụ otu Google kọwara ya na blọọgụ ha:
Yabụ, tupu ibanye n’ime isiokwu isiokwu websaịtị gị kwesiri ịdị na-arụ ọrụ ma na-arụ ọrụ. Ọbụna mgbe saịtị gị họpụtara, ọ kwesịrị imeju ebumnuche ndị ọrụ n'azụ ọchụchọ ahụ ma mezuo ebumnuche azụmahịa gị. (Eg downloads, email na ndebanye aha, wdg)
Ahapụ naanị ụtụ na uru; ike Keywords apụtaghị na ị ga-enwe nnukwu ọnụọgụ ahịa okporo ụzọ, na-eburu n'uche ihe ndị a kpọtụrụ aha na mbụ na blọọgụ ahụ, o siri ike ịsị ole okporo ụzọ isiokwu ga-adọrọ na weebụsaịtị gị. Ọbụna ma ọ bụrụ na onye na-enyocha ọkwa gosipụtara nsonaazụ dị mma, ị kwesịrị ịma maka eziokwu ahụ data nke isiokwu ndị ị na-ele abụghị nke zuru oke. Iji kọwaa ihe kpatara nke a, enwere m ike iwepụta otu mkpụrụ okwu iji zaa, Personalization.
Ka m kọwaara gị otu ịhazi onwe ya siri metụta ọchụchọ na nsonaazụ ọchụchọ n'ụzọ iji merie mkpa isiokwu dị na ọkwa na nsonaazụ ọchụchọ ahụ.
Google nwere ọtụtụ ozi anyị, gụnyere akụkọ ọchụchọ anyị, ebe anyị nọ, igwe mmadụ, ngwaọrụ anyị na-eji ma ọ bụ nke anyị na-ejikarị eme ihe, omume nchọgharị anyị, ebe anyị kachasị buru ibu na ọtụtụ ọrụ ndị ọzọ na nyiwe ndị ọzọ dị ka Youtube.
Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na m chọọ ebe mgbatị dị na New Jersey, nsonaazụ kachasị na Google m gosipụtara weebụsaịtị mgbatị ahụ m garala mbụ.
N'otu aka ahụ, ọ bụrụ na m chọọ ụlọ oriri na ọarkụ restaurantsụ na Newark City na 11 AM, Google ga-ahụ ya dị ka onye nọ n'ụgbọala na-achọta ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ iji rie nri ehihie.
Ya mere, iji nyochaa nsonaazụ ya, Google ga-egosi ụlọ oriri na ọ restaurantsụ restaurantsụ ndị mepere emepe, na-enye nri ehihie, ma dị n'ime okirikiri nke ọnọdụ m ugbu a dị ka nsonaazụ kacha elu.
Ndị a bụ naanị ihe atụ abụọ; e nwere ọtụtụ ihe ndị ọzọ na-agwa otú Google anaghị eji isiokwu ogo, iji depụta nsonaazụ.
Ingchọ na ekwentị na-adọta nsonaazụ dị iche iche ma e jiri ya tụnyere mgbe ị na-achọ na desktọọpụ. N'otu aka ahụ, Olu Google adọta dị iche iche results ka tụnyere Google ugbu a na-arụpụta. Nsonaazụ kachasị na-agbanwe ma ọ bụrụ na ị na-eji ihe nchọgharị ahụ na ọnọdụ incognito ya.
N'otu aka ahụ, otu okwu ọchụchọ ahụ abanye na ugwu California ga-enweta nsonaazụ dị iche iche ma ọ bụrụ na e jiri ya tụnyere ndịda California.
N'iburu nke ahụ, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na mụ na gị kwụ n'akụkụ, nsonaazụ ọchụchọ anyị ga-adị iche. Nke a bụ n’ihi ihe e kwuru n’elu, yabụ, ime mmadụ ihe.
Dị ka m mere na mbido, ị nwekwara ike ịlele irè nke mkpọsa gị site na ịchọ isiokwu dị mkpa wee hụ ma ị n'usoro na ibe mbu.
Mgbe ahụ ị ga-agaghachi na akụkọ ahụ iji hụ ihe nha ọkwa dịịrị maka isi okwu agbadoro anya.
Anyị ahụla n'elu etu mkpụrụokwu okwu na-esighi bụrụ metric dị mkpa iji kpebie ọganiihu nke azụmaahịa gị n'ịntanetị. Yabụ kedu ihe anyị ga - eme iji mee ka atụmatụ SEO anyị pụta ìhè?
Ọnọdụ dị mkpa Kasị Elu
Taa SEO atụmatụ eji ogologo ọdụ Keywords. N'ihi gịnị? Ha na - eme ka ihu akwụkwọ gị dị ka ihe dị mkpa na igwe nchọta ya mere a na - ahọrọ ya maka ndị ziri ezi n’ebe ziri ezi.
Nchịkọta isiokwu gị na ebe nrụọrụ weebụ adịghị mkpa, n'ihi na e nwere ụzọ dịgasị iche iche ndị mmadụ si achọ. Ọzọkwa, Google na-egosi nsonaazụ nke ọ bụla dabere na akụkọ ntolite ha, ọnọdụ, ngwaọrụ, wdg.
Ikwesiri igba mbọ hụ na ọnụọgụ ndị ọbịa na-abata na peeji nke gị site n’ịchọpụta ihe ọmụmụ na-eto kwa ụbọchị, ọnwa na afọ ọ bụla. Ikwesiri ilezi anya na ndi obia na ndi nleta ohuru si n’ahia ahia gi.
Ga-atụ anya mgbanwe ndị ọzọ site na ndị ọbịa na-abịarute site na nyocha ọchụchọ.
Buru n'uche na ahụmịhe ọchụchọ gị anaghị egosipụta nsonaazụ ọchụchọ nke ndị ahịa gị. Nke ahụ bụ ihe kpatara na ọ bụghị ihe ngosipụta nke ihe ịga nke ọma nke mkpọsa SEO gị ma ọ bụ na ọ na-agwa weebụsaịtị gị ga-enwetakwu mgbanwe.
Gbado anya na nsonaazụ, ebumnuche gị bụ ịme ka ekwentị gị daa, ịnweta ozi jupụtara na ụdị ịkpọtụrụ, ma ọ bụ taabụ iwu gị iji gosi iwu ọhụrụ.
Mgbe ahụ naanị ị nwere ike ịkpọsa mkpọsa gị ka ọ gaa nke ọma. Iru ebe ahụ adịghị mfe. Egbula oge ịrịọ enyemaka onye ọkachamara iji wulite mgbasa ozi gị na iji bulie egwuregwu SEO nke gị.
Tags: isiokwu n'usoroisiokwu rankingsogologo-ọdụ Keywordsndu nkpurunyocha ọchụchọmkpaA
Bill Acholla bụ onye na-ere ahịa dijitalụ na-eduzi ndị na-ewepụta mgbe niile na-abaghị uru nke ndị mmadụ dịka gị nwere ike iji zụlite azụmaahịa ha, dị ka isiokwu a. Lelee ya blog azụmahịa na Billacholla.com